[gallery_bank type = "images" format = "ပန်းရန်" title = "true" desc = "false" responsive = "true" display = "select" no_of_images = "13″ sort_by =" random "animation_effect =" bounce "album_title =" true "album_id =" ၂၁″]
ZDF 37Grad | | Arte သီချင်းများ TED ကို X ကိုနယ်သာလန် |
အိုးမဲ့အိမ်မဲ့၏မြင်ကွင်းမှ hacking ဥပမာအလင်းအနုပညာပွဲတော်, လှုပ်ရှားမှု့ဆော်ဒီအာရေဗျ, NSA က, etc, နှင့်မီဒီယာဆန့်ကျင်အလင်းရုပ်ပြောင်များနှင့်မီဒီယာများကလျစ်လျူရှုသည်အခြားအကြောင်းအရာများ: မှာ Oliver နိမ့် transhipment က်ဘ်ဆိုက်များ, သူအလုပ်ထားတဲ့အတွက်စီမံကိန်းများတွင်တစ်ဦးကို TED Talk ကို၌တည်ရှိ၏ ဆောင်ခဲ့ဦးမည်။
ZDF ၃၇ ဒီဂရီရိုက်ကူးထားသော PixelHELPER & Oliver မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတို၌သူသည်ဘာလင်ရှိအမေရိကန်သံရုံးတွင်အလင်းရောင်စီမံချက်ကိုမည်သို့စီစဉ်ခဲ့သည်ကိုပြသသည်။ ရဲများရောက်ရှိခြင်းနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရမည့်အနုပညာရုပ်ပြောင် NSA in da house ပန်းချီကားမှသည် Dusseldorf ရှိဘန်ကာရှိစာနယ်ဇင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းမှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းမှသည်။
Arte ပုဒ်မှာ pixel ကူညီ။ ဖက်ဒရယ်ထောက်လှမ်းရေးဝန်ဆောင်မှုအပေါ် Light က Project, တိုတောင်းသောဗီဒီယိုမှာ Oliver ဘာလင်အတွက်ဖက်ဒရယ်ထောက်လှမ်းရေး၏ဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အဦအတွက်ဖွဲ့စည်းသောအလင်းတိုက်ခိုက်မှုပြသထားတယ် Berlin.Dieses ။ စီမံကိန်းလူဦးရေဆန့်ကျင်လျှို့ဝှက်ချက်န်ဆောင်မှုအသုံးပြုတဲ့စောင့်ကြည့်မှုနည်းစနစ်များဆန္ဒပြရန်ဖို့ "BND အစား BMW ကား" ပြသထားတယ်။
အမေရိကန်သံရုံးရှိ KimDotCom နှင့် PixelHELPER အမေရိက၏ယူနိုက်တက် Stasi ။ SPIEGEL“ DerPakt” တွင်ထုတ်ဝေသည်။ ဤအိမ်လုပ်ဗီဒီယိုသည်ဘာလင်ရှိအမေရိကန်သံရုံးကိုနောက်ထပ်အရေးယူမှုတစ်ခုပြသသည်။ နံရံတွင် "United Stasi of America" ​​ထွန်းလင်းသော်လည်းရဲများရောက်သည့်အထိဖြစ်သည်။
15.07.2013 ထံမှ WDR လက်ရှိနာရီကနေ Pixel ကူညီ, BND နှင့် NSA.In အကြောင်းကို WDR လက်ရှိနာရီဒီထုတ်ယူသည့်သတင်းစာဆရာအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှာအမည်မသိတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများစည်းရုံးခဲ့သူ "ယူနိုက်တက်ရှတာဇီအမေရိက၏" လိုဂို၏အလင်းစီမံကိန်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
[Anke Engelke မှ WDR စတူဒီယိုတွင်စီမံကိန်းနှစ်ခုကိုတိုက်ရိုက် LIVE ဒီအိမ်လုပ်ဗီဒီယိုက“ NSA in da house” လိုဂိုတံဆိပ်ပါတဲ့ဆလိုက်တွေကို Bonn နှင့် Vienna ရှိကုလသမဂ္ဂအဆောက်အအုံများရှေ့မှာဘယ်လိုစုဝေးပြီးပရောဂျက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြသထားတယ်။
[အမေရိကန်သံရုံး၊ ဟမ်းဘတ်အပေါ့စားပရောဂျက်၊ ခြေနင်းလှေသည်ရဲလှေနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုတွင်လှပသောသြစတြီးယားလယ်ယာမြေတွင် Oliver နှင့် Sep ကိုပြသပြီးဗီယင်နာရှိ NSA အားဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရန်သြစတြီးယားများအားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက်သင်သည်အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး၏ရှေ့မှောက်၌ဟမ်ဘာ့ဂ်၌ရှိနေပြီးသင်လှေဖြင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်။ နဂိုအမှတ်အသားတွင် NSA ပါသည့်သြစတြီးယားအလံတစ်ခုကိုသင်ဆောက်လုပ်နေသည်။ အရေးယူမှုသည်အခြားမည်သည့်အရာနှင့်မဆိုရဲနှင့်အဆုံးသတ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ scan! Schlag တွင်း Raab, ProSieben တီဗီ Prank.Das ကဗီဒီယိုမှာ Oliver နဲ့သူ့အဖွဲ့ Cologne ထဲမှာ "Schlag တွင်း Raab" တွင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုလုပ်လူငယ်တစ်ဦး၏ကိုယ်ခြယ်သကြပုံကိုရှင်းပြသည်။ ယင်းဆောင်ပုဒ် "ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့စူးစမ်း" နှင့်အိုဘားမား၏ခြယ်မျက်နှာ၏ကိုယ်တွင်။ အဆိုပါအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကံမကောင်းလုံခြုံရေးများကချက်ချင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယူရိုအနည်းငယ်တောင်မှထူးခြားစေတယ်! မျှဝေခြင်းသည်ဂရုစိုက်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်လုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ပေးပါ
Tagged: da အိမ်တော်၌ NSA က, စောင့်ကြည့်မှု, အမေရိက၏ယူနိုက်တက်ရှတာဇီ, ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ scan!